Salaadda Virgen del Carmen. ? Kiisaska adag iyo Ilaalinta
Ducada bikradda reer Carmen, ma jiro xaalad adag oo aan lagu xallin karin jumlad oo markaa xaaladdu sidan tahay ducada inantii Carmen Waa istaraatiijiyadda kali-taliska ah ee in marar badan aan u baahan nahay inaan wajaho maalinba maalinta ka dambeysa, maxaa yeelay garan mayno waqtiga ay tahay inaan ku noolaano wax adag oo ay fiicantahay in laga hortago.
Tukashadu waa hubka xoogga badan ee aan isticmaali karno markasta oo aan rabno ama aan u baahanahay.
Gabadha bikradda ah waxaa loo arkaa inay tahay mid quus ah taasna waa sababta oo ah waa mucjisooyin jawaabahana waxay bilaabi karaan in lagu arko daqiiqado yar kadib salaadda, tani waa kiisaska inta badan kiisaska.
Ogaanshaha inaan haysanno qof jannada naga fahansan oo waliba noo doodi kara xaalad kasta oo jirta waxay na buuxisaa nabad iyo kalsooni in waxkasta hagaagi doonaan.
1 U ducee Virgen del Carmen Waa kuma Virgen del Carmen?
1.1 U ducee Virgen del Carmen kiisaska adag
1.2 Salaadda Virgen del Carmen ee iftiinka iyo ilaalinta
1.3 Salaad mahadcelin iyo qurbaan
1.4 Virgen del Carmen salaadda si ay u gaadho jacaylkeeda
U ducee Virgen del Carmen Waa kuma Virgen del Carmen?
Loo yaqaanay Our Lady of Carmen, waa mid ka mid ah u doodista la siiyay Maryantii bikradda ahayd. Magaceedu wuxuu ka yimid Buur Karmel oo dalka Israa'iil ah, oo macnaheedu yahay Jannada.
Wadamada qaarkood waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin ilaaliyaha badda iyo kuwa kale, sida Isbaanishka, waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin ilaaliyaha Isbaanishka Armada. Waxaa la sheegay in sanadka markuu ahaa 1251-kii bikraddan ay u muuqatay Saint Simon Stock oo ahaa sargaal ka sareeya Amarka.
Kulankaas ninku waxaa lasiiyay aragti iyo dhaqankiisa, labada astaamo ee waxa loo yaqaan dhaqanka guur-doonka ee Mariam ee dunida Karmelites.
U-adeecidda Maryantii bikradda ahayd caado ayay ahayd kaniisadda katooliga ee xoogga saarta muhiimadda gabadha bikradda ah markay timid Rabbigeenna Ciise Masiix oo ah qaabka nin dhulka ku yaal.
Qalabka Ilaah Aabbaha ah si uu u fuliyo ujeeddooyinka rabbaaniyiinta ilaa maanta
U ducee Virgen del Carmen kiisaska adag
Waxaan haystaa kun dhibaatooyin: i caawi.
Iga badbaadi cadowga nafta, Oo i badbaadi.
Khaladaadkeyga: i iftiimi.
Shakiyo iyo murugadayda: ii sheeg.
Xanuunnadayda: i xooji.
Markay i quudhsadaan, i qalbi qabow.
In lagu jirrabayo: i difaac.
Saacadaha adag: i raaxee.
Qalbigaaga hooyadaa ku jeclaada: i jeclaada.
Xooggaaga weynaan: i badbaadi.
Gacmahaagana markuu dhacayo: i aqbal.
Gabadha bikradda ah ee reer Carmenow, noo soo ducee.
Hooyo ahaan, Maryantii bikradda ahayd way ogtahay waxa murugadu ku tahay qof la jecel yahay oo ku jira xaalad khatar ah.
Way karti u leedahay waxayna leedahay awood ay ugu doodo baahiyaheena hortiis Eebbe wax walba.
Salaadaha lagu sameeyo iimaanka nafta waa mid wax ku ool ah, ma weydiin karno haddii aynaan aamminsanayn in mucjisada aan sugeynaba la siin karo, iyadoo aan loo eegin sida ay noogu adag tahay inay taasi suuragal tahay, xusuusnow markii aan tukanno inay taasi tahay maxaa yeelay Waxaan codsaneynaa wax uun lagu gaari karo oo keliya qaab dabiici ah.
Salaadda Virgen del Carmen ee iftiinka iyo ilaalinta
Oh gabadha Quduuska ah ee Carmen! Hooyada Rabbigeenna Ciise Masiix iyo ilaaliyaha dhammaan kuwa ku xeel dheer asturnaantaada xurmada leh.
Maanta waxaan tukanayaa khamiiskaaga sharafta leh inaad had iyo jeer igu iftiinaysid Wadooyinka mugdiga ah ee noloshaan aan ku dhex qaldami karo gacantaada la'aanteed.
Dambi dhaafo dhammaan dembiyadayda oo aan adiga ku jeclahay Aad ayaanan kuu xushmeeyaa maalinba maalinta ka dambaysa. Ha i dayrin daqiiqadaha belaayada, Waayo, haddaanad caayin, waxaan noqon lahaa ido qalaad.
Weydiinta nalka iyo ilaalinteena, xubin qoyska ah ama saaxiibtinimo gaar ah maahan wax cusub.
Xaqiiqdii waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah codsiyada ugu soo noqnoqda kadib mucjisooyinka caafimaadka.
Waa wax iska caadi ah in la dareemo amni darro ama nugul adduunka halkaasoo ay umuuqato in sharku ku sii kordhayo taasina waa sababta kor loogu qaadayo codsiyada ducada ee loo yaqaan 'Virgen del Carmen' ama qof kasta oo kale oo ilaaliya oo na caawin kara waa runtii mucjiso.
Salaad mahadcelin iyo qurbaan
Oh Gabadha Quduuska ah ee Carmen!
Kama jawaab celin karno si sharaf leh nimcooyinka iyo mahad-naqayaasha aad na siisay adigoo na siiya Scapular-kaaga quduuska ah.
Aqbalaadkeena fudud, laakiin macno qoto dheer, mahadsanid, maadaama wax aan ku siin karno aanu ahayn mid kugu habboon iyo naxariis.
Waxaan ku siinaynaa qalbiyadeena, jacaylkeeda oo dhan, iyo nolosheena oo dhan, oo aan dooneyno inaan u adeegsanno jacaylka iyo u adeegidda Wiilkaaga, Rabigeen, iyo fidinta cibaadadaada macaan ...
Waxaan raadineynaa dhammaan walaalaheena iimaanka, oo ilaahnimadu ilaah naga dhigeyso inaan ku noolaano oo aan xiriirno, qaddarino oo aan uga mahadcelino hadiyaddaada weyn, adigoo xiran xirmada Quduuska ah, iyo inaan dhammaanteen ku noolaan karno oo aan ugu dhiman karno jacaylkaaga iyo cibaadadaada.
Ma jeceshahay gabadha bikradda ah ee Camen salaadda mahadnaq iyo soo-jeedin?
Marar badan waxaan illoobiynaa salaadaha mar alla markii aan helno wixii aan dalbanay laakiin tani waa inaysan aheyn.
Baybalku wuxuu ka sheekaynayaa sheekooyin dad aan mahadnaqin iyo kuwa kale oo sameeyey.
Sidoo kale dalabyada aan bixinno, waxaan iska illaawinaa wax walba markaan haysanno waxaan dooneynay.
Ku tukashada ducada mahadcelin waa calaamad aan jannada lagu arkin. Markii aan bixinno dalabyo oo aanan fulin, waxay sidoo kale ku tusaysaa cirka.
Si kasta oo ay qaadanayso in looga mahadnaqo ama bixiyo wixii aad ballanqaadday, waxa ugu muhiimsan waa in la sameeyo.
Virgen del Carmen salaadda si ay u gaadho jacaylkeeda
Oh Gabadhii bikradda ahayd ee Carmen, Maryantii Quduuska ahayd!
Waxaad tahay Abuuraha ugu sharaf badan, ugu quruxda badan, ugu daahirka, uguna quruxda badan uguna qumman.
Oh, haddii qof walbaa ku garanayay, adaa iyo hooyaday, haddii qof walbaa kuu jeclaan lahaa sidaad u qalantay!
Laakiin waa la i qalbi qaboojiyey maxaa yeelay nafo badan oo barakeysan oo Jannada iyo Dhulka ku nool ayaa jacaylkaaga ku qurux badan iyo quruxdaada.
Aniguna waan ku faraxsanahay sababta oo ah Ilaah baa adiga kaligaa ka jecel dadka iyo malaa'igaha oo dhan.
Boqoraddayda aan aad kuugu jeclahay, anigu waxaan ahay mid dembila'aan daran, waan ku jeclahay, laakiin wax yar baan kuu jeclahay marka la barbar dhigo waxaad mudan tahay; Sidaas daraadeed waxaan rabaa kalgacal weyn oo kalgaceyl kuu qabo adiga, tanna waa inaad igu soo gaartaa, maxaa yeelay jaceylkaaga iyo qaadashadaada Scapular-ka Quduuska ah ayaa astaan ​​u ah saadaalintii ammaanta, iyo nimco uu Ilaah siinayo oo keliya kuwa sida hufan ee doonaya inay wax badbaadiyaan.
Haddaba adigu adigu waxaad gaadhay wax kasta oo Ilaah ka yimid, i sii nimcadan. Qalbigayga jacaylkayga ha ku shubo jacaylka aad ii muujiso, In aan kugu jeclahay sida wiil run ah, maadaama aad igu jeceshahay jacaylka aad u naxariis badan ee hooyadeed, sidaa darteed, in aan kugula biiro jacaylka halkaan joogo, adiga kaa tagi maayo goor dambe.
Ducadan waxay u duceysaa Virgen del Carmen si ay u gaarto jaceylkeeda aad buu u xoogan yahay.
Helitaanka jacaylka dhabta ahi waa walaac had iyo jeer ku sugan nolosheena, gaar ahaan markii da 'cayiman horay loo gaarey ama markii aad kaligaa ahaatid ka dib markii aad laba qof isqabtaan waqti go'an.
Sidoo kale tukashadani waxay wax ku ool u tahay kiisaska halkaas oo helitaanka lammaanuhu u taagan yahay heer gaar ah oo dhibaato ah ama kiisas aad u adag in jacayl ku dhaco ama laga guuleysto qof, salaaddahan si loo helo ama loo gaadho jacaylkooda.
Xusuusnow in hubka ruuxi ahi awood badan yahay oo aannaan iska indha tiri karno xitaa haddaan garanayn sida ay u shaqayso, waa istaraatiijiyad xoog badan oo aan u adeegsan karno wakhtiga aannu u baahan nahay rumaysad iyo kalsooni in tukashadan si xoog leh looga jawaabi doono.
Dhammaantood way wanaagsan yihiin, inay dalbadaan caawimaad iyo axulio waana khaldan tahay in taas la sameeyo wax kabadan hal jeer.
Ka faa'iideyso awooda ducada ee gabadha bikrada ah ee Carmen si aad noloshaada u beddesho.